PressReader - Isolezwe: 2019-01-14 - UJohnson ubona ingozi kwiChiefs
UJohnson ubona ingozi kwiChiefs
Isolezwe - 2019-01-14 - EZEMIDLALO - MALIBONGWE MDLETSHE
UKUNGABI khona kuka-Itumeleng Khune, oyisithenjwa ezintini zeKaizer Chiefs, akumenzi umqeqeshi waMaZulu, uCavin Johnson, alindele ukubhekana neqembu elintekenteke.
Umdlalo we-Absa Premiership useKing Zwelithini Stadium, eMlaza, ngoLwesithathu ngo7.30 ebusuku.
UKhune kuvele ukuthi uzophuthwa yizinyanga eziyisithupha engadlali ngenxa yokulimala ehlombe ngeledlule.
IChiefs isanda kushintsha umqeqeshi ixosha uGiovanni Solinas yavala isikhundla sakhe ngo-Enrst Midderndorp. Izobe iqala ukuyodlala KwaZulu-Natal kusuka ibuyise uMiddendorp ngoDisemba.
Ngaphansi kukaSolinas Usuthu luthelwe u 2-0 ovuthayo emdlalweni weligi eFNB Stadium ngoSepthemba. Ukushintsha kwabaqeqeshi kumcabangisa kakhulu uJohnson kunokuthakasela ukungabi khona kwesethenjwa esinguKhune.
“Ngomunye umdlalo omkhulu, iChiefs inomqeqeshi omusha. Imvamisa umshanelo omusha ushanela kangcono. Kuzofanele sidlale kangcono, silisebenzise kangcono futhi ebhokisini lezitha ibhola. Kumele sizame ukuthola amaphuzu,” kusho uJohnosn.
“Ngaphansi kukaSolinas bebengelinye iqembu kanjalo nangaphansi kukaMidderndorp behlukile. Ubona nangokuthi ngubani ogqoka ibhande likakaputeni kulezi nsuku. Yebo siyazi ukuthi uKhune (Itumeleng) usazongabi khona. Ziningi izinto ezishintshiwe.”
Ukhuluma kanjena nje uJohnson, ezakhe ziqhubekile nokuvikela irekhodi lazo lokungehlulwa ekhaya zibambana ngo 0-0 neHighlands Park ngoMgqibelo ebusuku.
“Uma ubheka umdlalo, bebezimisele ngephuzu.
DNendlela abebedlala ngayo iyabaceba. Kwezinye izikhathi kodwa sikwazile ukubahlakaza. Nesikimu sabo besishintshile kwesidlale ne-Orlando Pirates (bebambana ngo 2-2 emasontweni edlule). Angithandi ukuyibuka njengokupaka ibhasi (indlela abebegqishe ngayo emuva), ngincamela ukuyibiza ngokumaka okuhleliwe. Bekufanele sithi ukuqinisa ekubaqondeni. Sidlale ibhola elingcono, umehluko nje asilishayanga igoli. Ngo-2019 sifuna ukuqhubeka nokudlala ibhola eKing Zwelithini Stadium,” kusho uJohnson. “Akusikho ukuthi angeneme ngomphumela, yibhola leli. Sinamasizini amabili sibuyile. Uma ubheka lapho sisuka khona (esebhekise ezinkingeni zanyakenye) nezinombolo, ngicabanga ukuthi singelinye lamaqembu angcono kwiPSL.”
Noma kungekhona ukulimala kodwa noJohnson kubukeka ezolahlekelwa ngesinye sezethenjwa kuSibusisso Mabiliso, obizelwe ekhempini yesikwati sika-Under 20 (Amajita).
“Yisinqumo sethu ukuthi siyamdedela yini. Siyazi ubiziwe esikwatini sika-Under 20. Ngiyazi baya ekhempini izinsuku ezimbalwa. Uzohamba inyanga. UMabiliso ngumdlali omqoka kuMaZulu, sizobona ukuthi siyamdedela yini noma cha,” kusho uJohnson.
Mayelana nokuvala isikhala sikaMabuti Khenyeza, obengumgadli kuMaZulu kodwa osethathe umsebenzi wokuba yiphini likaMuhsin Ertugral kwiMaritzburg United, uJohnson uthe:
LFA“Ngicabanga ukuthi angilahlekelwanga ngumgadli kodwa yiphini lomqeqeshi.
“Angikho ezinhlelweni zokuthenga, angithandi ukuthenga ngalesi sikhathi ngaphandle uma kungathiwa sinabadlali abane abaphuke imilenze.”
UMQEQESHI waMaZulu uCavin Johnson akaboni kuzoyiphazamisa iKaizer Chiefs abazobhekana nayo ukungabi khona kukaKhune